‘रोमियो एण्ड मुना’को नयाँ प्रदर्शन मिति चैत २ « Ramailo छ
‘रोमियो एण्ड मुना’को नयाँ प्रदर्शन मिति चैत २
फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’को प्रदर्शन मिति परिर्वतन भएको छ । अब फिल्म चैत २ गते देखि प्रदर्शनमा आउने निर्माता प्रशन्न गोपालीले जानकारी दिए । विनय श्रेष्ठ र सृष्टि श्रेष्ठको शिर्ष भूमिका रहेको रोमियो एण्ड मुनाको प्रदर्शन मिति यसअघि फागुन ११ गतेलाई तोकिएको थियो ।
किन गरियो त फिल्मको प्रदर्शन मिति परिवर्तन ? निर्माता गोपाली भन्छन, ‘हामीले सोचेको समयमा फिल्मको काम सकिएन, त्यसकारण प्रदर्शन मिति सार्न बाध्य भयौं ।’ कस्तो काम ? उनी थप्छन्, ‘भि एफ एक्स र एनिमेशन सोचे जस्तो भएन । त्यसैले समय लिएर नै राम्रो काम निकाल्न फिल्मको प्रदर्शन मिति सार्नु पर्यो ।’ चैत २ गते भने फिल्म शतप्रतिशत रिलिज हुने निर्माता गोपालीले विश्वास दिलाए । विनयसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
नरेश कुमार केसीको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’को टिजर, पोस्टर र दुई वटा गीतहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । फिल्मलाई प्रशन्न गोपाली, रोजी श्रेष्ठ र कविन शाक्यले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा विनय र सृष्टिसँगै सुस्मा कार्की, प्रज्वल सुजल गिरी, सुरक्षा पन्त लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।